Dharka caadiga ah ee Mexico | Wararka Safarka
Maria | | dhaqanka, Mexico
Sawir | Xiiso badan
Dharka caadiga ah ee waddan, sida 'gastronomy' ama muusikada, waa muujinta hiddaha iyo dhaqanka. Marka laga hadlayo Mexico, dharkooda waa natiijada isku dhafka dhaqanka asaliga ah iyo Isbaanishka ee keenay naqshadaha gaarka ah. oo leh qaabab iyo midabyo ka yaabiya ajaanibta iyo shacabka qaranka labadaba.
Haddii aad had iyo jeer ka fekerto sida dharka caadiga ah ee Mexico u eg yahay, halkan waxaa ku yaal dib u eegis ku saabsan dharka ugu quruxda badan uguna quruxda badan waddanka Mareykanka.
Marka la eego balaadhintiisa weyn, waxaa jira noocyo kala duwan oo lebis ah oo ka kooban noocyadooda kala duwani iyadoo ku xidhan caadooyinka ama cimilada gobolka. Si kastaba ha noqotee, dharka caadiga ah ee Mexico sidoo kale waxay leeyihiin waxyaabo caadi ah. Tusaale ahaan, inta badan dharka lagu sameeyo dharka ayaa ah fiilooyin cudbi ah oo gacmaha lagu miiqay ama xariir maxalli ah. Sida loogu talagalay astaamaha qurxinta, kuwa ugu badan ee la isticmaalo waa ubaxyo iyo dhicin.
Dharka dhaqameed ee Chiapas waxaa loo yaqaan Chiapaneca waxayna ka timaadaa Chiapa de Corzo. Waxaa la rumeysan yahay in nashqadeyntiisa loo sameeyay inay matalaan hawdka iyo ubax qurux badanTaasi waa sababta ubaxyada midabada leh ay uga istaagaan asalka madow.
Suudhka chiapaneca wuxuu ka kooban yahay satin buluug ah oo leh qoorta bateau oo garbaha u bannaynaysa. Goonnada ayaa lagu xardhay dun xariir ah si ay u matalaan astaamaha ubaxa ee midabada sida caddaanka, buluuga, casaanka ama oranjiga. Sidoo kale astaamaha waa quechquémel, nooc poncho ah oo la dhigo qeybta sare ee jirka.
Sawir | Turimexico
Guadalajara, dharka caadiga ah ee labka iyo dheddigga waxaa loo yaqaan dharka Charro. Ninka waa madow oo leh faahfaahin midab leh. Sida dhameystir ahaan, nooc poncho ah oo ka sameysan ido ama dhogorta alpaca iyo koofiyad dhuxul ayaa loo isticmaalaa. Haweeneydu waxay ka kooban tahay buste buste ah oo dhererkeedu gaarayo anqawyada. Goonku wuxuu ku daboolan yahay daabac lagu sameeyay farsamada tolida iskutallaabta iyo dunyo midab leh.
Huichol iyo Cora Indians waxay dhaqankooda ilaashanayeen qarniyo badan haweenkooduna waxay caan ku yihiin hibada farshaxannimo markay tahay tolidda dharka dhogorta leh ee naqshadaha gaarka ah leh. Dharka labka ah ee caadiga ah waa kan Huichol wuxuuna ka kooban yahay adeegsiga buste cad iyo shaati ay gacmahoodu ka furan yihiin xagga hoose oo ay ku xardhan tahay naqshado midabbo kala duwan leh
Marka laga hadlayo dharka dumarka, waxay ka kooban tahay dharka midabbada leh ee leh gudaha iyo dibedda naguas kaas oo maro lagu daro oo daboolaya madaxa. Waxay sidoo kale lagu qurxiyey silsilado silsilad ah.
Dharka dumarka caadiga ah ee Puebla waxaa loo yaqaan 'china poblana'. Midabkiisu waa caddaan wuxuuna ka kooban yahay goon yar oo go'an iyo goon yar oo qaata magaca bever sababo la xiriira dharka lagu sameeyay ee gaara canqowga. Goonadan ayaa sidoo kale loogu yeedhi karaa zagalejo waxayna ka kooban tahay laba lakab: midka kore ee xariirta cagaaran iyo tan hoose ee sawirada la sameeyay. Suudku wuxuu leeyahay daabac midab leh oo dib-u-abuuraya qaababka ubaxa.
Jasiiradda Yucatan waa goobta qadiimiga ah ee Chichén Itzá dadka deggan gobolka ayaa wali ilaaliya caadooyinka asaliga ah, kuwaas oo lagu arki karo dharkooda caadiga ah.
Dharka waxaa lagu gartaa asal ahaan inta badan caddaan kaas oo ubaxyo midabbo kala duwan leh lagu xardho iyo dhexda lagu dhejiyo.
Sida dharka kale ee caadiga ah ee gobollada kala duwan ee Mexico, kuwa Oaxaca sidoo kale waxaa lagu gartaa inay yihiin kuwo aad u midab badan inkasta oo ay kaga duwan yihiin inta kale iyaga oo ku daabacaya astaamaha asaliga ah dharka sida xiddigaha, qaababka joomatari, xayawaan ama qorraxda. Farsamooyinka gumeysiga sida xargaha bobbin ama flamenco holanes, iyo kuwo kale, ayaa loo adeegsadaa diyaarintiisa. Xiisad ahaan, goonnada haweenka waxaa loo yaqaan 'posahuanco'.
Dharka caadiga ah ee dharka Yucatan ee haweenka waxaa loo yaqaan terno wuxuuna ka kooban yahay seddex qaybood oo loo yaqaan huipil, doublet iyo fustán. Qaybta dambe waxay ka kooban tahay goon dhexda ku dheggan oo dheer cagaha. Dhinaceeda, labanlaabku waa qoor laba jibbaaran oo la saaray huipil, dhar cad. Kaab ahaan ahaan ahaan, shaal loo yaqaan 'rebozo de Santa María' ayaa loo isticmaalay iyo tusaalaynta filigree ee ay sameeyeen dahableyda Yucatecan.
Sawir | SafarkaJet
Hadday tahay nooca lab ama dhaddig, dharka caadiga ah ee Veracruz waxaa loo yaqaan jarocho waxaana lagu gartaa inuu yahay caddaan. Haweenku waxay xirtaan goon balaaran oo dheer ilaa anqawyada taas oo xarigga ama dhejiska lagu tolay hooska kala duwan Dufan maro jilicsan ayaa lagu dhejiyaa goonnada, taas oo noqon karta maroon ama madow. Qalab kale waa shaarka xarka ah ee xariirta ah.
Sida labiska labka, dharka caadiga ah ee Veracruz wuxuu ka kooban yahay surwaal iyo shaati cad oo ay tahay inuu lahaado afar jeeb iyo afar shaati.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Mexico » Dharka caadiga ah ee Mexico
Maxaa lagu arkaa Rotterdam